Gbasara Anyị | Taizhou Bendi Valve Co., Ltd.
Taizhou Bendi Valve Co., Ltd.guzobere na 1988. Emi odude ke a isi mbupụ isi maka akpaaka akụkụ na ngwa na Yuhuan.Bendi ahụmahụ na imewe, n'ichepụta, ahịa na mgbe ire ọrụ maka akpaaka na ọgba tum tum engine valves ụlọ ọrụ. Bendi bụ a n'ógbè High-tech Enterprise nke ọma gafere ISO9001: 2000 na ISO / TS16949: 2009 International Quality System Asambodo.
Ngwaahịa anyị na-ekpuchi iri obodo na mpaghara, dịka: South America, North America, Europe na Asia, anyị nwekwara OEM na Russia engine Valve Company na ụlọ OEM ụlọ.
Anyị na-agbaso usoro dị elu na njikwa na teknụzụ dị elu maka imepụta. Chacha teknụzụ, akụrụngwa dị elu, ahụmịhe bara ụba na njikwa nke oge a bụ uru anyị pụtara ìhè ma bụrụ nnukwu nkwa maka mmepụta nke ngwaahịa kacha mma.
Anyị bụ otu n'ime ndị kasị ghọtara ụdị na China ụgbọala mgbe-ahịa ahịa. Anyị na-eje ozi zuru ụwa ọnụ ụlọ ọrụ mgbe ihe karịrị afọ 20 ma na-amị ihe karịrị 5 nde engine valves kwa afọ. Anyị nwere ike ịzụlite ma rụpụta ngwaahịa ọhụụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, ma jikwa obi sie ike maka ogo nke ihe atụ / eserese zụtara n'aka ndị ahịa. Anyi nwere ulo oru nyocha ihe nlere di elu nke ejiri ngwa oru nyocha na ngwa nyocha ohuru.
Na asọmpi ahịa dị ọkụ, BENDI na-ekwusi ike mgbe niile imeri ndị ahịa na ngwaahịa dị elu, teknụzụ dị elu na ọrụ dị elu. Anyị nwere ahịa ahịa niile, bụ usoro ọrụ zuru ezu ma zuru ezu, ka ndị ahịa wee nwee ike ị nweta ndụmọdụ na ọrụ na nke mbụ. Anyị na-ewulite ntụkwasị obi ma na-agbaso usoro iwu na ogo niile dị na nke dị na mpụga site na ịnye ngwaahịa na ọrụ na-ezute atụmanya na mmasị ndị ahịa. Onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ anyị na-enweta ya enweghị ntụpọ na enweghị omume mkpofu. -Lọ ọrụ na-achịkwa njikwa niile maka nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa.
BENDI ọhụụ bụ: "comeghọ The Best Engine valvụ Manufacturers Na The World."
No.11, Jingfeng Road, Na Qimo Industrial Mpaghara, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, PRChina